Ireo mpamoaka lahatsoratra tsara indrindra ho an'ny iPad | Vaovao IPhone
Raha tamin'ny andro lasa izay dia niresaka taminao izahay Pages, ny mpanodin-teny ny Apple ary nanao famakafakana fohy momba ny fampiharana izahay, ary koa ao anatin'ny ora vitsivitsy dia hanana famakafakana fohy momba ny Keynote, tonian-dahatsoratr'i Apple an'ny fampitaovana iOS. Androany aho hiresaka momba ny inona ho ahy, ny fampiharana fanovana lahatsoratra tsara indrindra ho an'ny iPad.
Mbola misy bebe kokoa angamba fa hotantaraiko anao izany Mpanonta 3. Samy manana ny heviny matanjaka ny tsirairay: ny famolavolana, ny fahatsorana, ny iCloud ... Samy hafa avokoa izy rehetra nefa samy manana ny asany daholo: ny manolotra ny mpampiasa izay heverin'izy ireo fa tianay hatsaraina amin'ny fanovana lahatsoratra amin'ny iPad. adelante:
Pejy: processeur an'ny Apple
Mazava fa izy no iray amin'ireo tsara indrindra ary tokony ho ao anaty lisitra, eny na eny. Tsy hoe avy any Apple izy io fa ampiasaiko matetika foana amin'ny tambajotra Wi-Fi ary noho izany dia tsy manana olana aho amin'ny fampifanarahana ny antontan-taratasiko Pejy amin'ny Pejy amin'ny Mac-ko ary noho izany ny fikirakirana antontan-taratasy dia be dia be eo anelanelan'ny Mac sy iPad. Ny teboka matanjaka indrindra amin'ny pejy dia ireo tsy mety famolavolana ary ny endri-javatra. Ny teboka tokony hanatsarana indrindra an'i Apple amin'ny fanavaozana lehibe manaraka dia ny fotoana miaraka amin'ny iCloud.
Maimaim-poana ny antontan-taratasy: ny kinova maimaim-poana an'ny Office Mobile App
Amin'ity rindranasa ity dia tsy vitan'ny mamorona antontan-taratasy fotsiny isika fa ao koa ny fomba famoronana takelaka. Na dia tsy manana endrika tsy manam-paharoa na fiasa maro hisehosehoana aza izy io. Ny teboka malemy dia famolavolana mazava, satria efijery fotsiny io ary mila manoratra miaraka amina fitaovana fanovana vitsivitsy isika, tsy misy hafa. Fa ny teboka tena matanjaka ho an'ny Documents Free dia ny fampifanarahana ireo antontan-taratasy hafa amin'ny iPad, amin'ny alàlan'ny iTunes, amin'ny alàlan'ny Wifi, amin'ny alàlan'ny mailaka, Dropbox ary mandrindra miaraka amin'ny antontan-taratasin'i Google.
Antontan-taratasy 2 maimaim-poana: fampifanarahana bebe kokoa miaraka amin'ny antontan-taratasy hafa ary endrika tsara kokoa
Manana a famolavolana tena mitovy amin'ny teo aloha satria avy amin'ny orinasa iray ihany izy ireo, saingy samy manana ny toetrany. Ny fiasa dia mitovy, fa ny endriny mifototra amin'ny manga sy mainty. Satria avy amin'ny orinasa iray ihany izy ireo, ny tanjaka dia ny endriny sy fotoana izay mitovy ary ny teboka malemy indrindra amin'ity tranga ity dia ny dokam-barotra, saingy azo vahana amin'ny fandoavana € 3,59.
Araka ny hitanao ao amin'ny App Store dia manana ny zava-drehetra sy bebe kokoa izahay. Amin'ity tranga ity dia nasehonay anao Mpanonta lahatsoratra 3. Ho an'ny fampifanarahana dia aleoko maimaim-poana ireo antontan-taratasy, ny endrika miaraka amin'ny Pejy sy ny fampiasa koa. Azo antoka fa misy maro hafa fa ireo no ampiasaiko matetika, saingy manana Pejy ...
Misy tsy hita ve? Ny hevitrao? Misy koa!
Fanazavana fanampiny - Pejy: mpanodin-teny ao amin'ny Apple
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » App store » Ireo mpamoaka lahatsoratra tsara indrindra ho an'ny iPad
Ho an'ny tsiriko, ny textilus no mpanamboatra teny tsara indrindra, farafaharatsiny mba handray naoty ao an-dakilasy. Izy io dia manana bara azo haingoina ahafahanao manampy ny endri-tsoratra ampiasainao indrindra ary hanafainganana ny fanoratana. Izy io koa dia misy fampifanarahana amin'ny dropbox, mail sns.
Handefa azy io aho hijery ny fandehany. Hotsapaiko mandritra ny herinandro vitsivitsy ary raha izany no izy dia hanao Reviw aho. Misaotra nanolotra an'io!
Francisco Revollo Z. dia hoy izy:
Mampiasa ny asa haingana aho, tena tsara!
Valiny tamin'i Francisco Revollo Z.
Salama, misintona pejy aho ary miara-miasa aminy. Fa nanoratra ahy manga tampoka aho ary tsy mandeha tsara ny fitendry. Ary ity no loko marina amin'ny mainty. Ampio, ampio.
Ahoana no hialana amin'ny fandraisana hafatra amin'ny alàlan'ny iMessage avy amin'ireo olona tsy ananantsika amin'ny fifandraisantsika
Blendamaze, ny lalao maze kilasika miaraka amin'ny lokon'ny loko